Hands ka Jebiyayaasha 'Ka dhig off Your iCloud
Dad badan oo inaga mid ah dib iCloud dhici in ay la socdaan macluumaadka oo dhan; Si kastaba ha ahaatee; aad u ogaato dulduleelo ee ammaanka? Ka warrama sida ugu fudud ee Anonymous ayaa jebin kartaa in aad xisaabta iCloud? Helitaanka xogta iCloud aad u baahan tahay oo kaliya username ah oo ay la socoto sirta ah. Sidaas, haddii aadan haysan sirta ah runtii xoog, Anonymous ayaa awoodi doonaan in ay helaan galo habka iyo marka ay leeyihiin in ay helaan xogta iCloud, waxa fudud in iyaga in ay geeystaan ​​qaar ka mid ah burburka weyn oo xitaa tirtiro xogta aad joogto ah iyo sidoo kale .
Waxa jira kiisas badan oo halkaas caanka ah ayaa soo wajahay cadhada Anonymous ayaa sidoo kale. Mid ka mid ah dhacdo caan ah waa in ku lug Mat Honan, kuwaas oo ahaa geysato hore si dhowna la ah iyo xitaa editor ah in majaladda banki ayaa sidoo kale. Jebiyayaasha loo isticmaalo geynta ciidamada caayaan in ay jebiyaan oo uu xisaabta iyo ugu dambeyntii uu ku dhacay oo dhanna ka photos, emails, waraaqaha iyo wax badan oo ka mid ah files kale oo muhiim ah iyo sidoo kale.
Ma aha oo kaliya Mat Honan, waxaa jira wax badan oo caanka ah kuwaas oo la kulmay cadhadii iCloud sawir darroor. Dadka caanka heerka Top sida Jennifer Lawrence, Kaley Cuoco, Jill Scott iyo wax badan oo dheeraad ah ayaa la xaqiijiyay in sawiro ay ahaayeen xaday. Dhab ahaantii, ma aad rabto in ay la kulmaan dhibaatooyinka la mid ah iyo si aan la wadaagi doona siyaabaha ugu sareysa by kaas oo aad ka ogaan kartaa haakarisku ee aad iCloud.
Ilaali account iCloud
Markii aad raadinayso si aad u ilaaliso account iCloud oo aad rabto in aad iska sii Anonymous, halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talaabooyinka kala duwan oo aad u baahan tahay si ay u hirgeliyaan.
1. Dooro waxa aad ku kaydiso
Waxaad fursad aad ku dooranayso files in aad raad raac aad iCloud. Haddii aad qabto files kuwaas oo aad u xasaasi ah oo qarsoodi ah, waxaa laga yaabaa in sida ugu wanaagsan lagula taliyay in aysan iyaga dib iCloud. Si ay u sahamiyaan faahfaahinta waxa aad kor u taageerto, waxaad u baahan tahay si ay u tagaan goobaha iyo ku dhaqaaqa in iCloud.
Waxaad ka arki kartaa liiska barnaamijyadooda kala duwan oo toos ah oo taageeray oo ay warbixin u soo diray inay iCloud. Waxaad toggle karo iyo inta u dhaxaysa Chine kuwaas oo dooran doono gurmad waxa. Tegid files in xasaasi yihiin.
2. Resetting sirta
Force caayaan waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee weerarka kaasi oo loo adeegsaday by Anonymous aawadood helo si aad iCloud. iCloud ma dadka qufulo xitaa ka dib markii lagu celceliyo isku day lagu guulaysan. Tani waa sababta haakarisku ku hayn karaa isku dayaya-gaynta kala duwan ilaa iyo inta ay dalka ku kor mid sax ah. Tani waa sababta aad u baahan tahay in ay dib sirta ah waqti ka waqti. Waa in aad isku daydo oo ay leeyihiin sir ah oo wanaagsan. Hubi in ay sii sirta ah random iyo xitaa markaas, waxaan ka codsan doonaa inaad u bedesho si joogto ah. Sidoo kale, su'aasha ammaanka waa in ay adag tahay in la qab qabto.
3. sugida laba qodob
Tani waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee looga hortagi karo weerarada ciidamada caayaan, Kuna hortago tuugada ka helo galo in aad nidaamka. Lahaanshaha ah laba qodob sugida waa hab fiican oo lagu hayo habka ammaan ah. Si loo fuliyo wajigan, raac tallaabadaas.
Dhaqaaq ID aan Apple oo markaas u jiheysan 'maamuli lahayd Apple Id iyo saxiixato ". Hadda, dhaqaaqo "password dooro iyo ammaanka. Dooro laba xaqiijinta tallaabo ka dibna riix 'is arkeen'. Marka aad u soo jeestay oo ku saabsan, mar kasta oo aad gasho si aad id Apple, waxaad heli doontaa lambar sir ah oo ku saabsan qalab aad dooratay.
Marka xigta ee aad gasho oo aad id Apple, waxaad heli doontaa lambar sir ah oo ku saabsan mid ka mid ah aaladaha aad password baahan yahay in la soo galeen si guul gasho.
Inkasta oo dhan, kuwaas oo saddex tallaabo, waxaan kugula talin lahayn la tirtiro sawirrada gaarka ah ka iCloud si joogto ah si haddii Hackers a helo helitaanka aan la ogolayn, iyagu ma ay awoodi doonaan in ay helaan aad sawiro gaarka loo leeyahay.
Sidee in ay tirtirto sawiro ka iCloud si joogto ah?
Haddii aad rabto in aad tirtirto raad dhan ah sawirada joogto ah, halkan waxaa ku qoran waxyaabo aad u baahan tahay in la sameeyo.
Sawirada takhalusid ka durduri la wadaago
1. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad u tagto app ee photos ka dibna hoose ee shaashadda, waxaad ka heli doontaa icon loo yaqaan 'la wadaago'. Tubada ee la mid ah.
2. Laga liiskan oo ay soo bandhigi doonaa, waxaad tirtiri kartaa oo dhan durdurrada la wadaago. Waxaad kartaa inaad u guurto mid kasta oo ka durduri iyo iyaga tirtirto ama aad si fudud u xulashada karaa hab edit ka dibna dooran dhan badhamada cas iyo tirtirto oo dhan webiga.
Sawirada takhalusid ka durduri sawir aan
1. Tag aan app sawiro ka dibna riix on icon album ku yaalla meesha ugu hooseysa ka.
2. Waxaad ka heli doontaa gal ah oo lagu magacaabo 'il sawirkayga'. Dooro dhamaan sawirada galkan iyo tirtirto oo dhan oo iyaga ka mid.
Marka sawirada kuwaas waa laga saaray dhammaan qalabka aad Apple, waxa ay ka dhigan tahay in aad iyaga tirtirayaa ka iCloud sidoo. Waxaa jira hal talaabo dheeraad ah oo aad u baahan tahay in la sameeyo.
NAAFADA KU gurmad iCloud
Waxaad si aad u hubiso in aad gab gurmad auto ee aad sawiro iyo filimo ka si aad u server iCloud. Si taasi ay u dhici, u tag goobaha app ka dibna ku biiro iCloud iyo kuwa, madaxa inay sawiro. Hadda, dami labada il sawir iyo qaybsiga sawir. Tani waxay ka hortagi doonaa mid taageero dheeraad ah images in aad iCloud.
Iyadoo tallaabooyinkan fudud, waxaad saari karaan sawiro aad ku kaydsan ee iCloud.
> Resource > iCloud > dhig gacmaha Jebiyayaasha 'Off Your iCloud